Kushungurudzwa Kwenhengo DzeMDC Koenderera Mberi
Kubvumbi 14, 2008
Nhengo yeMDC inonzi Tapiwa Mbwanda yakauraiwa nevarikufungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF kuKazangarare MuKaroi.
Vaikwikwidza kuve mumiriri weHurungwe Central VaBigboy Haurove, vaudza Studio 7 kuti varikutyira kuti mutumbi waVaMbwanda, ungangotorwa nevasori ukanovigwa kuBulawayo, sezvakaitwa VaGift Tandare, avo vakauraiwa zvakare munyaya dzezvematongerwo enyika gore rapera.
Carole Gombakomba weStudio 7, aita hurukuro nemutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa uyo asvika pakaungana vari kuchema VaMbanda, kuti tinzwe zvirikuitika panyaya iyi.
Vatsigiri veMDC vanonzi varikuramba vachishungurudzwa mudunhu reManicaland. Vakakunda musarudzo dzekumirira Mutare South, VaMisheck Kagurabadza vaudza Studio seven kuti mhuri dzinodarika zana hadzichina pekugara mushure mekupisirwa dzimba paEngant farm kuMutasa South.
KuMutasa South uku, vatsigiri vebato iri vanonzi varikudzingwa munzvimbo dzavagere nevaimbove varwiri vehondo yerusununguko pamwecehete nevechidiki veZANU-PF.
Varikutsigira ZANU-PF ava, vanonzi vakaviringa zvakare nyaradzo yenhengo yeMDC kuWard 4 kuNhendziwa, Chimanimani west.
Mutori wedu wenhau Loirdham Moyo anotipa nyaya iyi
Ukuwo, imwe nhengo yebato iri VaAbel Manyika, vanoti vakapisirwa dzimba dzayo papurazi reDawmill kuBindura husiku hweSvondo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
VaManyika vanoti vanhu ava vakasvika pamusha pavo ndokutanga kuvashevedza vachivati vabude panze asi ivo vakaramba vari mumba. Vanoti vakazokwanisa kubuda pamwe nemudzimai wavo ndokunyangadika murima, voona musha wavo uchiparadzwa.
Mutori wedu wenhau Jonga Kandemiiri aita hurukuro naVaManyika kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.